musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Ecuador Breaking Nhau » Kuita zvakanaka Galapagos
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • tsika nemagariro • Ecuador Breaking Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Kukura gore rega rega mukuzivikanwa, izvo Zvitsuwa zveGalapagos inzvimbo yakatsvakirwa-kwazvo yezororo. Ichowo chimwe chezvinhu zvisina kusimba zvisikwa.
Kukwezva kwechitsuwa ichi kubva kumahombekombe eEcuador kunogona kufananidzwa nehanzi inokandira zai regoridhe. Kuve wakakurumbira, akadaro Todd Smith, muvambi uye purezidhendi weAventureSmith Explorations, zvinoreva kuisa njodzi kukura kusingadzoreki mukushanya uye zvivakwa zveiyi UNESCO World Heritage Saiti.
"Izvi zvinogona kukonzeresa kukanganisa zvisikwa zvinotsigira hupenyu hweshiri, zvipuka nemhuka zvinofambirwa nevanhu kunoona," akadaro.
Kutevera ndidzo nhungamiro yekuti ungaita sei Galapagos zvakanaka.
- Enda nechikepe chidiki (12 kusvika 100 vashanyi). Ngarava diki dziri pamoyo peGalapagos Islands zororo. Kupupurira shiri nemhuka dzesango munzvimbo dzadzo dzisina kupikiswa pachitsuwa kunowanikwa zvirinani nechikepe chidiki. Sei? Kufukidza anopfuura zviuru zvitatu zvemakiromita nezvitsuwa zvikuru gumi nezvitatu, zvitsuwa zveGalapagos zvakakura kupfuura zvaunofunga, uye nzvimbo zhinji dzevashanyi dzinongowanikwa chete nemvura. Kurara mungarava husiku hwega hwega kunotendera huwandu hwakawanda hwekutsvaga nekuti haufanire kudzokera kunzvimbo yepasi pekugara manheru ega ega mushure mekufamba kwechikepe nechikepe.
Sangano reInternational Galápagos Tour Operators Association (IGTOA) rinoshuma kuti zana muzana rekukura mukushanya kweGalapagos mumakore gumi apfuura kwakabva mukushanya kwepasirese panguva iyo kushanya kunoenderana nengarava kwakaderera.
"Ship-based travel in the Galapagos inodzorwa zvakanyanya kusimudzira ruzivo rwevaenzi uye kudzikisira kukanganisa zviwi," akadaro Smith, uyo anoshandawo kubhodhi re IGTOA. Tourism yenyika parizvino haina kudzorwa, uye chinangwa cheGTOA, UNESCO uye mamwe mapoka ekuchengetedza kuti vasvike pazvitsuwa kukura nekungwarira sekushanya kwakavakirwa nengarava.
- Gara kwenguva yakareba sezvaunogona. Nekuzvibvumidza iwe kuti uwane imwe nguva munzvimbo yezvitsuwa uri kuenda kunosangana nemhuka dzesango dzinogoneka uye nekuona yakafara nzvimbo yezvitsuwa. Kugovera nguva yakawanda kuti unzwisise misiyano isinganzwisisike yezvakatipoteredza pakati pezvitsuwa kunowedzera ruzivo uye kunobatsira kuchengetedza nendege dzendege shoma mukati nekunze. Yekufamba nendege pamwe nekuwedzera kwekutakura zvinhu ndezvimwe zvezvinonetsa zvakaonekwa neUNESCO mune yayo 2016 State of Conservation Report pamusoro peGalapagos Islands sezvo aya ari ekutanga vectors ekuuya kwemarudzi matsva anopinda.
Kugara kwenguva refu kunobatsirawo kutsigira nzanga yemuno nemikana yakawanda yekubatana zvine chinangwa. "Tinokurudzira dzinenge 7-husiku / 8-zuva cruise," akadaro Smith.
- Ita kuchengetedza kuve kwekutanga. Pamberi perwendo rweGalapagos, vanhu vanokurudzirwa kudzidza pamusoro pemasangano ekuchengetedza uye zvinodiwa munharaunda uye nekupa nguva kana mari kwavari.
- Ronga kumberi, zviite zvakanaka kamwe chete. Kufamba uchienda kunzvimbo isina kusimba sezvo maGalapagos achifanira kuitwa kamwe chete, saka ita kuti sarudzo yekusarudza inakidze rwekufamba kamwe-mu-kwehupenyu. "Tenga ruzivo rwakanakisa uye utsvage zano kubva kune nyanzvi yakaenda kuGalapagos Islands," akadaro Smith. Kugadzirira kwekutanga kunopa mamwe mazuva uye sarudzo dzechikepe, pamwe nezvipo zvakakosha senge yekutanga-shiri dhisikaundi.
- Snorkel! "Kana ukasapinda mumvura, urikushaya hafu yemhuka dzesango muGalapagos," akadanidzira kudaro Smith. "Hapana kushayikwa kwehove dzine mavara-mavara, asi kusangana nemweya inokatyamadza megafauna (shumba dzegungwa dzinotamba, shaki, mwaranzi, njiva), iguana dzegungwa dzinotaridzika sepamberi uye penguin chete inogara kuchamhembe kwequator ndiyo inonyatsoita kuti Galapagos inyurure nyoka." Snorkeling sarudzo inotangira kubva pakadzika-mvura kusvika kune anotanga-ane hushamwari mahombekombe egungwa snorkels. Kune avo vasinganyatsoda snorkel, unogona kusarudza ngarava ine girazi-pasi chikepe. "Kupindirana nemhuka dzesango dzeGalapagos uye kuvaona vari padhuze kudaro kunosimudzira pfungwa yekuchengetedza paunenge uchibatana nemhuka dzisingatyi," akadaro Smith.
- Rangarira uri muSouth America. Usamhanye rwendo uye urasikirwe nekutsvaga zvishoma zvezvimwe zvimwe Ecuador kana mamwe matunhu ari padyo, senge Sacred Valley neMachu Picchu, Peru, vanofanira kupa.